सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको कति पर्यो शेयर, हेर्नुस यसरी ! - Everest Dainik - News from Nepal
सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको कति पर्यो शेयर, हेर्नुस यसरी !
काठमाडौं, कार्तिक २२ । सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको साधारण शेयर बाँडफाँड भएको छ । कम्पनीले निष्काशन गरेको १ लाख ८० हजार कित्ता साधारण शेयर बुधबार बाँडफाँड गरिएको हो । शेयर माग गरेकामध्ये ज्यादै न्यून आवेदकले मात्र १० कित्ता शेयर पाएका छन् ।
माइक्रोफाइनान्सको साधारण शेयरका लागि २ लाख ३७ हजार ६ सय १७ वटा आवेदन परेको थियो । जसमा २ हजार ३ सय ९६ आवेदन रद्द भएका छन् । बाँकी रहेका २ लाख ३५ हजार २ सय ४८ आवेदनलाई मात्र शेयर बाँडफाँड प्रकृयामा सहभागी गराइएको छ ।
सोही अनुसार लघुवित्तको सेयर १६ हजार ७ सय ४० जनाले प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुलाई १० कित्ताका दरले शेयर बाँडफाँड गरिएको हो ।
आईपीओ नतिजा हेर्न मेरो लगानीको आइपीओ रिजल्टमा गएर आइपीओ ( IPO RESULT ) जारी गर्ने कम्पनीको नाम र आफ्नो डिम्याट नम्बर भरेर सर्च गर्नुहोस् । तपाईले शेयर परे नपरेको नतिजा थाहा पाउनुहुनेछ ।
ट्याग्स: Micro Finance